Madaxweyne Soomaaliyeed baanu kaa filaynee maxaad ka macaashaysaa maydka reer Sool
Waxaa la yiraahdaa meeshaan cir (roob) ka sugaynay baa ceeryaamo ka timid. Xaddiis baa ahaa: camal fala, qof kasta waxaa loo sahlin wixii loo abuuray. Carabtu waxay dhahdaa “man caasha calaa shey’in maata calayhi”. Sidoo kale waatii Barkhad Cas (Allaha u naxariisto) lahaa: waxaad walafto oon wad kaa helin ka waantoobay waa war loo noqon. Ama sida Soomaalidu u tiraahdo waxaad barato waa baaskaa.
Maantadan oo Laascaano nin lagu dilay waxay ku aaddantahay sanad-guuradii kasoo wareegtay dagaalkii Dhuudo ee C/hi la galay ehelkiis waa sida ay Horseednet werisay. Qur’aankaa sheega in dadka munaafiqiintaa sanadkii mar ama labo jeer la fidneeyo.
Oday Soomaaliyeed oo geed rag kale kula sheekaysanaya ayaa waxaa far iyo suul isku soo qaaday wiil yar oo uu dhalay nin oday ah oo isna meesha fadhiyey. Odaygii wuxuu yiri: war ninkii wiilkaas dhaloow ka hortag. Ninkii wiilka dhalay waa is-dhejiyey. Wiilkii inta raggii soo dhex istaagay buu yiri: aabbe hooyo waxay kuleedahay kaalay oo ciirta noo bixi. Oday inta is haaraamay buu yiri: uf maxaan lahaa. Runtii ninkii reerkiisa wax u aqoola ceeb maahan laakiin dhaqanka Soomaalida, arrimaha noocaasa waxaa lahaa hooyada. Markii hogaamiyaha Puntland la doortay waxaan runtii u naxay reer tolkeey. Fikradayda waan ka hordhiibtay dadka ka soo jeeda Puntland ee London jooga. Waxaa ii sawirnaa waxaas uu sameeyey.
Horta ma aamminsani inuu jiro ruux u caawiyey kornayl C/hi sidaan u caawiyey! Dad badan waxay mooddayaan khiyaali. Bal daalaco sidaan u caawiyey.
1. Horta waxaan siiyey xasanaad badan waaba haddiiba wax ajar ah la ii qoray kaddib markaan halkaas la soo taaganahay eedayntiis iyo wax-ka-sheegiis. Taloow Soomaalidu ma ila qaysanaysaa dhibkaas? Waa adoo “standing order” ama dheh “direct debit” qof u qoray oo khasnadaada lacag iska socota lagala baxo waqti xaddidan oo kasta, dheh asbuuc ama bil kasta.
2. Runtaan warqaddaha ugu sheegi jiray in qaabkaas uu ku socdo aan madaxweyne lagu helin ee uu kaliya dadka ehelkiis ah dhib usoo jiidayo. Ma noqon qolyaha been la ag-fadhiya ee wax kasta oo uu sheego dhaha xaq baad ku taagantahay ama xaqaad la jirtaa.
Haddii qoraa ama wariye damco inuu wax ka qoro wixii uu Puntland u qabtay waxaan filayaa inay isagu soo ururayso dhib iyo dekeno kaliya.
1. Markii seddexdii sano u dhamaatayba wuxuu diiday inuu xukunka ka dego. Waa la ogaa in Boosaaso khasab looga soo saaray oo halkaas waxaa ku dhintay dad badan.
2. Wuxuu diiday inuu odayaashii u soo qoor dhiibto
3. Markii odayaashii isaga markii hore doortay ay dhaheen waxaannu dooranay nin kale, ayuu wuxuu meel uga dhacay “jiwaarkii”/magan-gelintii Islaanka Garoowe, wuxuuna weerar ku qaaday guri uu degenaa Jaamac Cali Jaamac, halkaas oo dad badan ku dhinteen.
4. Markii uu Boosaaso qabsanayey wuxuu jidka kusii dilay dad badan oo aan dagaalka ku jirin, wuxuuna xabsiga u sii taxaabay dad aan dambi lahayn oo qaarkood macalimiin dugsi ahaa.
5. Waxaa ilaaladiisu si bareer ah ugu dileen magaalada Garoowe nin afka loogu dhacay oo ka mid ahaa waxgaradkooda ahaana nin sarkaal ah oo ganacsi usii dheeraa.
6. Wuxuu galay dagaalkii uu la galay ehelkiis oo uu horboodayey Cadde Muuse. Waxaa labada dhinacba ka dhintay dad boqolaal ku dhow.
7. Waxaa kaloo sababtiis ku dhintay Suldaankii qoladiisa, Hurre iyagoo dhuhur cad, carruurtii iyo dumarka hortooda ku dilay.
8. Isagoo dadka Puntland dullaystay oo ka dhigay waxaan damiir lahayn kaddib markii labo nin oo Carab ahaa oo halkaas degenaa muddo dhan oo sii horraysay uu Zenawi u taxaabay. Nasiib wanaag Zenawi waa iska soo ceshay.
9. Dhaqaalihii Puntland oo gaaraya maalaayiin Doolar wuxuu u qaybshay qolyaha ganacsaarka la leh isagoo filayey inuu mar noqon doono madaxweyne Soomaaliyeed.
Intaasoo jirta ayaa ilaa hadda la garan la’yahay meel loo raaco. Shalay waxuu lahaa waxaan noqon qofka ugu dambeeya ee shirka haddana wuxuu leeyahay waan tagayaa.
Soomaalidu runta ma jecla waxaan reer Sool weydiin ma garanaysaan cid kale oo C/hi dhib u geystay oo aan ahayn cidduu ka soo jeedo? Soomaaliya Soomaali baa leh waliba waqtigan xaadirkaa uma baahnin dagaal iyo dhib. Ani iyo C/hi midna ma jecla in Gaalkacyo oo ay wada degaan dad kala qolaa in dhib ka dhacdo sidee buu isagu u rabaa in Laascaano lagu dagaalo? Waa caqligee kan dhahaya C/Risaaq Afguduud baa Fu’aadka wasiir u ah Somaliland ka hor istaagaya Laascaano? Shakki ma leh in reer Sool qaarba gobol taageero, si kastaba ha ahaatee loomana baahna dagaal. Haddii reer Sool rabaan in sidda qolyaha Waqooyi Bari ay is buux dhimaan oo si fudayd ah boqolaal wiil uga dhimato iyagay u taal laakiin C/hi oo Kenya kusoo fashilmay oo boorka lagu reebay hadduu rabo inuu meeshaas colaad ka abuuro si uu u helo marmarsiinyo uu uga baaqdo shirka Kenya haddee ha yeelo. Miyeydaan u jeedin sida Muuse Suudi iyo C/Qaasim u heshiiyeen? Hadda Muuse Suudi wuxuu sulux ugu socdaa Jowhar halka C/hi uu guluf uusan itaalkeed lahayn ugula socdo Hargeysa. Habar Gidir iyo Digil iyo Mirifle inteedoo badnayd heshiiye marka maxaa saacadan dagaal nagu wata?
Fariin ku socota waxgaradka “Puntland”
Horta yoolkeenu ma in C/hi madaxweyne noqdaa mise in Soomaalidu heshiiso oo Soomaaliya dowlad yeelato? Maaddaama aan cadkeena cid kale qaadanayn, dan kama lihin haddii dadka shirka 9-ka Janaayo lagu casuumay noqdaan 42 ama afar boqol. Soo tii shirka loo dad badsan jiray. Ogaada 42 qof ma ahan kuwa jago loo qaybinayo. Tusaale intii C/hi kaliya noo tagi lahaa hadday noo tagto seddex ama afar maxaa naga dhacaya?! Mise waa sidii ninkii lagu dacaayadayn jiray isagoo seddex xiddigle ah baa la dalacsiiyey oo gaashaan la siiyey. Kaddibna inta nin kale u tagay yiri haddaan seddex xiddigood haystay oo mid kaliya (gaashaan) la ii siiyey imisaa mushaar iga go’aysa! Bal fiiriya sida C/hi u khiyaamay ergadii namatalaysay. Wuxuu yiri anigu ma bixi karee ordoo soo heshiisiiya dadka is haya (Wersangeligii gadooday). Golihii baarlamaanka ee Puntland waxaa lagu yiri ma jiro qof safar geli kara. Waa madax-furasho dadban. Marka wuxu rabaa in dad ergo sheeganaya oo Puntland ka socda aysan Kenya uga dambayn. Sidoo kale wuxuu na barayaa haddii qof Puntland ka soo jeeda lagu casuumo shirka 9-ka bisha, in Puntland ay wax luminayso.
Laakiin waxaan u sheegayaa C/hi, tag ama ha tagin, annaga waxaa namatala ciddii meesha ku harta. Kenyey buuxaan dad wada aqoonyahan ah oo Puntland u dhalatay.
Kiplagat iyo guddiga IGAD-ba ha ogaadeen haddaan reer Puntland nahay waxaan wax la qabnaa Soomaali weyn. Marka laga reebo xaaladdan uu C/hi abuurayo ee ah in la isugu dhaco Somaliland iyo Puntland, dhulkaan ka nimid waa degenyahay mana jirto qab-qable aan is-hayno. Maaddaama aysan jirin cid aan is-hayno kaliya waxaan rabnaa in dagaal-oogayaasha kale ee is-haya la heshiisiiyo sidoo kale aan ka hadalno arrimaha la xiriira dastuurka, xabad-joojinta iyo wax-wada-qabsi. Marka hadday C/Risaaq Xaaji Xuseen iyo Cali Khaliif kaliya ku soo haraan waa na matali karaan laakiin waxaan aamminsanahay inay Nairobi joogaan dad kale oo Puntland ka socda.
Bal ii sheega caqliga uu C/hi u rabo inuu shirka dhex-fadhiyo C/Casiikii uu Zenawi soo diray uuna u diidan yahay inaan C/Risaaq Xaaji Xuseen iyo Cali Khaliif Galayr aysan meesha soo xaadirin? Teeda kale haddaadanba Cali Khalfii wax u ogolayn maxaad iskaga dhigaysaa, nin reer Sool wax u taraya? Reer Sool ma ahan anagoo kale ee waa dad aamminsan in qof kasta oo reer Sool ah uu Sool tagi karo halka aysan Xasan Abshir iyo Jaamac Cali Jaamac Waqooyi Bari tegin karin.
Marka reer Puntland diyaar ma u yihiin inay maqlaan dadka caqliga u saaxiibkaa? Jawaab baan ka sugayaa. Marka inta C/hi Garoowe ku noqdo ha dhisto meelihii uu dadka guryahooda ka dumiyey iyadoo Ramadaan lagu jiro.
Waxaan ku talin lahaa sidii Georgia ay iskaga cayrsheen madaxweynahoodii, annagu aan iska cayrino ninkaan ilayn meelna nooma wadee. Maxkamaddii London in horay loo wado waxaa hor taagnaa shirka Kenya marka hadduu shirka ka baxo waxaa la helayaa fursad loogu yeero in uu iska soo xaadiriyo London.
Faafin: SomaliTalk.com | Dec 31, 2003